अनौठो संसार Archives - Page3of4- Samachar Post Dainik
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०८:४७
नेपालमा यस्तो पनि गाउँ छ । जहाँ युवतीहरुले केटा नपाउँदा वैवाहिक स’म्बन्ध राख्न पाएका छैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो खबर गोरखाका ‘विकट गाउँहरुको हो । बिही ६, न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन् । न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गरौं भन्ने प्र’स्ताव राख्छ । अहिलेसम्म उनको लगन जुरेको छैन.....
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०८:३०
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन.....
फेरि एउटा दुःखद घटना: मूर्ख बाउले २९ वर्षिया आमाकाे ज्यान लिए !
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार २३:१८
भक्तपुर । यतिबेला फेरि एउटा दुःखद घटना भएकाे छ । असोज १८ गते विहान विकाश कासिछ्वा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ९, बह्मायणी नजिकै रहेको आफ्नो घरमा थिए । बहिनी रुँदै माइती घरमा आइन् । २९ वर्षकी निरु कासिछ्वा (नागा) विकाशकी कान्छी बहिनी हुन् । केही वर्षयता श्रीमानको हिं ‘सा’बाट पी डित निरुको सहारानै माइती.....
घरको छतबाट आवज आइरहन्थ्यो:६ महिनासम्म वास्तै गरिनन,६ महिनापछी हेर्दा दुनिया अचम्मित
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार २३:५४
छतबाट अनौठो आवाज आइरहन्थ्यो। ६ महिनादेखि यस्तो चलिरहेको थियो ।दिन यसको जाँच गर्दा यस्तो वास्तवि कता खुल्यो कि खुट्टामुनिबाट जमिन नै भासियो।घटना अमेरिकाको जर्जियाको हो। यहाँकी लीजा नाम गरेकी एक महिलाको घरबाट यस्तो चीज निस्कियो जसलाई देखेर जो कोही चकित परे। लिजाले जब पहिलो पटक यो घरमा आउँदा यो आवाज सुनिन्.....
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार ०४:०४
एजेन्सी। अष्ट्रेलियामा एक युवतीले बैंकको ग’ल्तीले ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६ लाख डलर आफ्नो खातामा हालिदिएपछि सबै पैसा खर्च गरिदिएकी छन् । उनले खातामा पैसा आएको थाहा पाएपछि सबै खर्च गरिदिएकी हुन् । मलेशियन छात्रा क्रिस्टीन जियाशिन ली को खातामा उक्त रकम पुगेको हो । बैंकलाई आफ्नो गल्ती महसुस हुँदा सम्म.....
एक मन्दिर छ जहाँ महिलाहरु भुईमा सुतेमा गर्भ वती हुन्छन्
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:५८
यस्तो एक मन्दिर छ जहाँ महिलाहरु भुईमा सुतेमा गर्भव ती हुने विश्वास गरिन्छ । मन्दिरमा यस्तो विश्वास मात्र नभई यस्तै भएको पनि छ । यसबाट धेरै मानिस दंग परेका छन् । सन्तान–दात्री मन्दिर हिमाचल प्रदेशको एक गाउँमा अवस्थित छ । यो मन्दिर सिमसा माताको मन्दिर मानिएको छ ।जहाँ निसन्तान महिला भुईमा सुतेमा गर्भवती हुन्छन्.....
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०६:५४
वैवाहिक स’म्बन्ध राख्न पाएका छैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो खबर गोरखाका ‘विकट गाउँहरुको हो । बिही ६, न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन् । न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गरौं भन्ने प्र’स्ताव राख्छ । अहिलेसम्म उनको लगन जुरेको छैन । ‘गाउँमा केटा छैनन्, म मात्र होइन हाम्रो गाउँमा थुप्रै.....
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:५०
पुरुषले पनि बच्चाको जन्म दिन सक्छन् ? यो कसैले पत्याउने विषय होइन । तर, यस्तो पनि भएको छ । एक पुरुषले बच्चालाई जन्म दिएका छन् । बच्चालाई जन्म दिने व्यक्ति ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन् । विश्वको पहिलो गर्भवती यी पुरुष तीन बच्चाको पिता बनिसकेका छन् । वास्तवमा पहिले गर्भवती पुरुष थामस बैटी आफ्नो नाम बताउने उनको.....
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ११:०८
मस्त जवानी, धपक्क बलेको रुप तर, अनेक चाहार्दा पनि विहेका लागि केटा नै भेटिँदैन । युवतीहरुमा देखिएको यो समस्या ब्राजिलको हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाउँमा ३५ बर्ष मुनीका ६ सय जना अविवाहित महिलाहरु रहेका छन् । तर, अविवाहीत पुरुष भने १ जना पनि छैनन् । ६ सय जना महिला तथा युवतीहरु विवाहको लागि पुरुष नपाए.....
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०२:१८
जनावर जस्तो वफादारी मानिस पनि हुन सक्दैन । जनावर मध्ये पनि कुकुर सबैभन्दा वफादार हुन्छ । जनावर मध्ये कुकुरले मानिसको दिल जितेको छ । कुकुर कुकुर जस्तै हुन्छन् तर आज हामी मानिसको अनुहारसंग मिल्ने कुकुरको बारेमा चर्चा गर्दैछौ । सामाजिक सञ्जालमा एक यस्तो कुकुर भेटिएको छ जसको अनुहार कुनै मानिसको जस्तो देखिन्छ.....